(တောင်တွင်းကြီး မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
တောင်တွင်းကြီးမြို့သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ ‌တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၏ ရုံးစိုက်ရာမြို့ဖြစ်သည်။ တောင်တွင်းကြီးမြို့သည် မ‌ကွေးမြို့မှ အ‌ရှေ့ဘက် (၅၁)မိုင် ကွာ‌ဝေးသည်။ ‌ပေလေးပင် သျှင်လေးပါး ‌ပေါ်ထွန်း‌သောမြို့ဟု မြန်မာစာ‌ပေ‌လောကတွင် ထင်ရှား‌ကျော်‌စောသည်။ မကွေးတိုင်းအတွင်း တောင်တွင်းမြို့ရှိသကဲ့သို့ အထက်ချင်းတွင်းတွင်လည်း တောင်တွင်းအမည်တူ မြို့တစ်မြို့ ရှိပါသည်။ ထိုမြို့နှစ်မြို့ကို ကွဲပြားစေရန် မကွေးတိုင်းအတွင်းမှ တောင်တွင်းကို တောင်တွင်းကြီးဟု ခေါ်ဆိုသကဲ့သို့ အထက်ချင်းတွင်း တောင်တွင်းကိုမူ ချောင်ကျသဖြင့် တောင်တွင်းချောင်ဟု ကုန်းဘောင်အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ခွဲခြားခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ 
တောင်တွင်းကြီးမြို့သည် အနောက်ဘက်တွင် မကွေးမြို့သို့ ၈၂ ကီလိုမီတာ(၅၁ မိုင်) ရှည် ကားလမ်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ တောင်ဘက်တွင် ပြည်မြို့သို့ ၁၆၂ ကီလိုမီတာ(၁၀၁ မိုင်)ရှည်ကားလမ်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အရှေ့ဘက်တွင် နေပြည်တော်နှင့် ပျဉ်းမနားမြို့သို့ ၆၈ ကီလိုမီတာ(၄၂ မိုင်)ရှည် ကားလမ်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြောက်ဘက်တွင် မြို့သစ်မြို့သို့ ၂၉ ကီလိုမီတာ(၁၈ မိုင်) ရှည်ကားလမ်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ထားသည်။ ကားလမ်းခရီးဖြင့် ရန်ကုန်-နေပြည်တော်လမ်းမကြီးမှတဆင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ၄၇၅ ကီလိုမီတာ(၂၉၀ မိုင်) ခရီးအား ၇ နာရီ ခန့်မောင်းနှင်သွားရောက်နိုင်သည်။ မန္တလေးမြို့သို့ မန္တလေး-နေပြည်တော်လမ်းမကြီးမှတဆင့် ၂၇၇ ကီလိုမီတာ(၁၇၂ မိုင်) ခရီးအား ၄ နာရီခွဲခန့် မောင်းနှင်၍ သွားရောက်နိုင်သည်။ ထိုပြင် ပျဉ်းမနား-ကျောက်ပန်း‌တောင်း မီးရထားလမ်းသည် ‌တောင်တွင်းကြီးမြို့ကို ဖြတ်၍သွား‌လေသည်။ မကွေးမြို့သို့လည်း မီးရထားလမ်း ရှိသည်။
↑ Provisional Results Census 26 August 2014 FINAL, ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန, 26 August 2014, p. ၂၉, retrieved January 10, 2015
↑ တင်နိုင်တိုး (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၁၂၂။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောင်တွင်းကြီးမြို့&oldid=522012" မှ ရယူရန်
၂၉ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၄:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၄:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။